Kungani udinga ukuya kusazi sokusebenza kwengqondo futhi ungabi namahloni ngakho - Psychology 2022
Kungani udinga ukuya kusazi sokusebenza kwengqondo futhi ungabi namahloni ngakho
Isazi sokusebenza kwengqondo udokotela
Osaziwayo abaningi baya kodokotela bengqondo
Isazi sokusebenza kwengqondo sisiza ukuzazi
Ngisho neminyaka engu-10 edlule, kwakungaphatheki kahle ukusho ukuthi ubona isazi sokusebenza kwengqondo. Lokhu ngokuqinisekile kungavusa uchungechunge lwezingxoxo nezingxoxo ngemuva.
Kodwa umhlaba uyashintsha futhi namuhla kuyinto evamile ukukhuluma ngezinkinga zakho ezingokwengqondo. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi awushiywanga wedwa ngalokho okukukhathazayo, kodwa ukuya kuchwepheshe, kukwenza ube ngumuntu onamandla emehlweni alabo abaseduze nawe abafuna ukushintsha okuthile. Futhi yingakho.
Wonke umuntu unezinkinga. Lokhu kuhle. Futhi awuphoqelekile nakancane ukuzenza “uwesifazane ophakeme” ohlala esezingeni eliphezulu.
Uma uphethwe izinyo, uya kudokotela wamazinyo. Uma ungemuva, uya kudokotela wezinzwa. Futhi uma uzizwa kabi, uya kusazi sokusebenza kwengqondo. Lokhu kunjengoba kufanele kube njalo, ngoba umphefumulo nawo udinga ukunakwa. Futhi uma kubuhlungu, ukuphila kwakho ngeke kwanelise futhi kujabulise.
Yebo, uma ucabanga ukuthi abantu abadumile nabacebile baxazulula izinkinga zabo ngokwabo - akunjalo. Osaziwayo abaningi banongoti wezengqondo kubasebenzi babo osiza osaziwayo ukuthi babhekane nomthwalo wodumo futhi bahlale bejwayelekile.
“Yebo, ngihlala ngivakashela isazi sokusebenza kwengqondo. Ungisiza ukuba ngiziqonde, ngibone indima yami kulo mhlaba, ngithole izixazululo ezindabeni ezithile,”kusho u-Shakira. Ngaphezu kwakhe, uMadonna, uGwen Stefani, uChristina Aguilera, uBrad Pitt nezinye izinkanyezi eziningi zivakashela njalo isazi sokusebenza kwengqondo.
Abantu bakhuluphele, ngezinye izikhathi bayagula futhi ngezinye izikhathi bahlushwa isimo sengqondo esibi. Ukuze baziqonde futhi bafunde ukuhlala nabo ngokuthula, abantu baphendukela kusazi sokusebenza kwengqondo. Eqinisweni, i-psychotherapy iwuhlobo lokufaneleka komphefumulo wakho. Futhi lokho kuhle.
Ucwaningo olwenziwa odokotela baseMelika lubonisa ukuthi abantu abaya kusazi sokusebenza kwengqondo bathola umlingani womphefumulo ngokushesha futhi bakhuphule izinga lomsebenzi ngokushesha, ngoba bazazi kahle: kokubili amandla nobuthakathaka. Futhi, okubaluleke kakhulu, abesabi ukusebenza ngokwabo.
E-Ukraine, manje sebebekezelela ngokwengeziwe lapho umuntu eya kusazi sokusebenza kwengqondo. Ngakho-ke, ngisho neminyaka engu-5 edlule, amakhasimende ami afihla leli qiniso futhi ayekhathazeke kakhulu uma othile ovela kubajwayele noma kunjalo ethola imfihlo yabo. Namuhla abantu abaningi abagcini nje ngokuba namahloni ngeqiniso le-psychotherapy, kodwa futhi bayeluleke kubangane babo nabajwayelene nabo. Ukuthi nje umphakathi wethu uyashintsha, - kusho isazi sokusebenza kwengqondo uValery Didenko.
Injabulo, ubuhlungu, ukuhlupheka: ukuthi ungaba kanjani nokuthi wenzeni ngakho
Ukuba ngumuntu ophumelelayo nojabulayo kalula nje ngesisusa esifanele. Udinga ukufunda ukujabula. Ungakhohlwa ukuthi udala injabulo ngemicabango yakho njalo ngomzuzu